Yintoni i-Metal Mesh? | Dongjie
Umyalezo wesinyanzeliso wensimbi ukwenza imingxunya yemilo eyahlukeneyo kwizixhobo ezahlukeneyo ukufezekisa iimfuno ezahlukeneyo, Ingasetyenziselwa njengesixhobo sokufunxa isandi sendlu yophahla kunye nodonga lwendlu yezakhiwo. Ingasetyenziselwa ukwakhiwa kwamanqanaba okwakha, iibhalkhoni, iitafile zokhuselo lokusingqongileyo kunye nezitulo zemingxunya yokuhombisa ecekeceke; ingasetyenziselwa ukhuselo lwezixhobo zoomatshini, isithethi sesithethi, ukutya, ukutya, ukutya, imigodi enesingci sokukrola, isile, isisi, h izixhobo zekhitshi ezine Isithsaba sephepha elingasasebenziyo lesibhakabhaka, ukutya, itreyi yeziqhamo, ezinjengezinto zasekhitshini kunye nezinto zombane, kunye nevenkile ethengisa izinto ezinkulu, iqonga lokubonisa umhombiso, iinkozo zokuphefumla komoya wokuphefumla, ibala lebhola ekhatywayo. Imveliso, efana nesandi sokuvalelwa kothuli, njengoko kubonisiwe kumfanekiso olandelayo: Iimpawu zomkhiqizo: zinokulula, ukucombulula ukubumba, ukupeyinta ukupenda okanye ipolishi, ukufakwa ngokulula, imbonakalo ekhangayo, zonke iintlobo zobukhulu beplanti, ezahlukeneyo yokuthambisa okhethiweyo kunye nolungiselelo, isiphumo esihle sokufumana isandi, ubunzima bokukhanya, ubomi benkonzo ende, imilinganiselo echanekileyo yemesti isetyenziswa ngokubanzi koomatshini bemichiza, izixhobo zamachiza, ukutya d oomatshini bokuhambisa iziselo, umatshini wecuba, umsiki, abacoci, itafile yesinyithi, izixhobo zesandi, izixhobo zefriji, imeko yomoya ephakathi) izithethi, ukuveliswa kwezandla, ukwenza iphepha, izixhobo zombane, izixhobo zokucoca iifayile kunye nako konke ukuhamba kobomi.
Uninzi lwezixhobo eziluhlaza zokubhoboza i-mesh zezi: yintsimbi engaginyiswanga, iplati yensimbi yecarbon, iglasi ebandayo yePVC, kunye nokunye.
Ezi ndidi zezi zilandelayo: ipatheni yokuhlaba ngogonyamelo i-mesh, ukwenza i-punching mesh, i-mesh engaphezulu kwe-punching eyomeleleyo, i-mesh e-punching engacacanga, i-mic-hole punching mesh, kunye ne-line-cut punching mesh.Laser punching mesh, njl.
Hole: umngxunya oxandexekileyo, umngxunya osisikwere, umngxunya wedayimani, umngxunya wokujikeleza, umngxunya we-hexagonal, umngxunya womngxunya, umngxunya omde wokujikeleza, umngxunya wobude obuqinileyo, umngxuma weplum, umngxunya wendlela yokuloba, umngxunya wephethini, umngxunya weenkwenkwezi ezintlanu, umngxunya ongalinganiyo, umgqomo wedrum, njl.
Ingasetyenziselwa izithintelo zokhuselo lokusingqongileyo kwizithintelo kulawulo lwezithintelo kwizibonelelo zikamaspala zendlela ezinje ngoohola bendlela, oololiwe neendlela ezidlula ezidolophini. Ingasetyenziselwa ukufakelwa kwesandi kunye nokunciphisa ingxolo yokwakha iindonga zento, amagumbi enzala, izakhiwo zomzi mveliso kunye neminye imithombo yengxolo. Ingasetyenziselwa ukufunxa kwesandi kunye nophahla lwezakhiwo.